दराजले सन् २०१९ को अन्तिम किनमेल मेला “१२.१२”आयोजना गर्ने, ६० प्रतिशतसम्मको छूट दिने - Technology Khabar
» दराजले सन् २०१९ को अन्तिम किनमेल मेला “१२.१२”आयोजना गर्ने, ६० प्रतिशतसम्मको छूट दिने
काठमाडौं । ११.११ को सफलतापछि अनलाइन् शपिङ्ग साइट दराजले वर्षको अन्तिम किनमेल मेला दराज १२.१२. को घोषणा गरेको छ । दराजको १२.१२.अभियान यही २६ मंसिर देखी पुष २ सम्म लागू हुने बताईएको छ ।
यस अभियान द्वारा उपभोक्ताहरुले अन्तर्रािष्ट्रय र स्वदेशी टप ब्राण्डहरुका सरसामानहरुमा ६० प्रतिशतसम्मको भारी छूट, मेगा डिलहरु, क्रेजी भाउचरहरु पाउनुका साथै मिसन १२.१२. र वान रुपी गेम जस्ता नयाँ र रमाइला गेमहरुमा भाग लिन पाई उपहारहरु प्राप्त गर्न सक्ने छन् । साथै उपभोक्ताहरुले दराजका बैंकिङ्ग पार्टनरहरुको डेबिट र क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरि अन्लाईन पेमेन्ट गर्दा थप २० प्रतिशत अथवा रु १,५०० सम्मको छूट पाउनेछन् ।
दराज नेपालका प्रबन्ध निर्देशक लिनो अलरिंगले भने, ‘दराज ११.११. को रेकर्ड तोड्ने सफलता र ब्ल्याक फ्राईडे को थप सफलताले गर्दा गत नोवेम्बर हामी र हाम्रो बिक्रेताहरुको लागि “सुपर नोभेम्बर” नै हुन पुग्यो । त्यसैले हामी यो सफल साल, २०१९, हामीलाई सदैव सपोर्ट गर्नुहुने उपभोक्ताहरुका साथ् भव्य तरिकाले विदाई गर्न चाहान्छौं । र खास गरि ११.११ को फाईदा उठाउन नपाउनुभएकाहरुलाई भनि हामीले यस ग्रान्ड अभियानमा थप नयाँ डिलहरु लिएर आएका छौँ ।’
गूगललाई फ्रान्सद्धारा १५ करोड यूरो जरिवाना, अनलाइन विज्ञापनमा एकाधिकार कायम गरेको आरोप